Le log multi - blade isar ithathwa ukuba iingenelo lokondla egudileyo, processing olucolekileyo, akukho blade isarha ovuthayo, ukusebenza eliphezulu, ezisetyenziswa ziphephe, ukhuseleko kunye protection.This lokusingqongileyo, eyiyo, ophezulu-ngqo kunye nezixhobo ukonga ubugcisa iinkuni sawing. uphando kunye nezixhobo zophando kunye nophuhliso lweprojekthi, emva kweminyaka emininzi yabasebenzi bezobuchwephesha abazinikeleyo kuphando kunye nophuhliso, yimpumelelo ephezulu kwezobugcisa kunye namalungelo epropathi enomgangatho wokuqonda.
I-log enye ye-chip-chip saw inokutshintsha iisarha zebhendi ezine zesiko. Izixhobo zamkela ubume obutsha kunye nenani leetekhnoloji ezintsha, kwaye umxholo wayo wobugcisa ufikelela kwinqanaba eliphambili lehlabathi. Izixhobo zinokucheba iinkuni, isiqingatha seengodo kunye neenkuni zesikwere ngaphakathi kwe-20cm ubukhulu.Yatsho ukuba isebenza ngokuchanekileyo, ngokuchaneka okuphezulu, kuba inokuba sisarha yokuloba kwinani leemilinganiselo zebhodi esekwe ngaphambili, inqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo. ubukhulu be-blade 1.5 1.7 mm, kunye ne-saw blade ngokuthelekiswa ne-2.5 3.0 mm ubukhulu, ukusika ilahleko yendlela kunomnye umatshini wokusarha kuncitshiswe nge-46%, ngokuchaseneyo, inqanaba lezinto ezibonakalayo liphezulu njenge-76% ukuya kwi-80%, amaplanga izinga ukusetyenziswa malunga neepesenti ezingama-27 ngaphezulu kunaleyo ezinye iintlobo kumatshini sawing, kunye nenkqubo ukusika uzinzile, sawing ipleyiti ubukhulu efanayo, umphezulu egudileyo, iyunifomu ukutyibilika ngqo phezulu, nayo kunganciphisa isiqingatha inkqubo yokugqiba umphezulu iinkuni.
Kwangelo xesha, kuba amandla eemoto ewonke asezantsi, ukusetyenziswa kwesixhobo kuncitshisiwe ngama-25% ukuya kuma-40%.
Zimbini iintlobo eziphambili zeelogo zemigca emininzi: isaround kunye nkqo.
Kuxhomekeke kwiprofayili ofuna ukuyicwangcisa - ukuba kungumbindi wokuthatha isikwere, qiniseka ukukhetha ilog ethe tyaba enemibala emininzi, kuba isarha yesarha emi nkqo, ngoko ke nokuba ubukhulu be sangqa log ukuba ungavula zonke iinkuni, ungakhetha isarha ethe nkqo ethe nkqo, kuba isarha yesarha isike izingodo ngokuthe tye, inokusikwa.
1. Isetyenziswa ikakhulu ekugwebeni ubude beengodo ezincinci. Ngokobungakanani obusetiwe ngaphambili, iipleyiti ezininzi zinokusaarishwa kwindawo enye yokutya.
2. Xa kuthelekiswa nebhendi yebhanti, ukusebenza kakuhle koomatshini kuphezulu, ukuchaneka kuphezulu, ukusebenza kulula kwaye kufanelekile, kwaye iimfuno zobuchwephesha zabasebenzisi aziphezulu, ezenza iintsilelo zebhendi yokuchaneka ngokuchanekileyo phantsi, ukusebenza kwayo kusezantsi, ukusebenza kweemfuno zobugcisa kuphezulu.
3. Isarha blade ixhotyiswe ngesixhobo sokupholisa, ekungekho lula ukuyitshisa isarha kunye nokwandisa ubomi benkonzo yesarha yesarha.
4.Umqolo ophindwe kabini wokondla itsheyini elibukhali, ulondolozo olulula kunye noqoqosho.
5. Isiphelo sokukhupha sinesixhobo esisebenzayo sesikhokelo sokondla, ekungekho lula ukubamba isarha kunye nokuphucula ukugudla kokondla.
6. Isiporo sikaloliwe esiphambili nesibuyela emva nesikhokelo sesondlo sebhokisi yokuluka sinikezelwa ngeoyile yimpompo yokuthambisa yokuthambisa, eyolula ubomi benkonzo kaloliwe wesikhokelo.
1.Ukulawula kunye nokujonga ikhonkco lokondla, ukondla iimoto kunye nokuhamba kwemoto ngaphakathi kwelog ye-chip chip ezininzi rhoqo.
2. Rhoqo ujonge ukuba ubude bebhanti kunye nokuxinana kweemoto eziphambili ziphakathi, ikomityi ye-oyile yebhokisi kufuneka igcwaliswe rhoqo nge-oyile, nokuba umbhobho weoyile ngokufanelekileyo amazibuko.
3. Isigqubuthelo sephedi, isarha yesaladi kunye nekhaba lokuhambisa inqwanqwa kwiisaji ezininzi kufuneka zicocwe rhoqo (iintsuku ezi-3 ~ 5) ngeoyile yedizili, kwaye zicocwe ngelaphu elicocekileyo. Akufuneki kubekho ii-sundries ngexesha lofakelo, kwaye emva koko zicocwe ngelaphu.
4. Isiseko se-spindle kufuneka sisetyenziselwe ukugungxula umngxunya ngamanzi kanye ngemini xa kutshintshwa isarha ye-multi-chip, okanye uvuthele umpu womoya kwindawo ekukuyo ngaphakathi ukuze uvuthele ukungcola kwaye uqinisekise ukuba indawo egudileyo.
5. Rhoqo ujonge ukuba ngaba intonga yokuluka ngaphakathi kwelog ye-multi-slice saw machine ikhululekile.
IKhabhinethi yesixhobo somthi, IsiCwangciso seKhabhinethi sezixhobo zeKhabhinethi, Cnc Machine Izixhobo, Cnc Bits, Iibhodi zendlela ze-CNC, Izixhobo zikaRobin Wood,